तपाईंको छालाको लागि शीर्ष BEST सर्वश्रेष्ठ फेशियलहरू! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - INSYNC
तपाईंको छालाको लागि शीर्ष Best सर्वश्रेष्ठ फेशियलहरू!
समाचार अभाव समस्या होईन: स्वास्थ्य मन्त्रालयले COVID खोपहरूलाई 'ब्यवस्थापन' गरेको आरोपमा राज्यको निन्दा गर्दछ
घर Insync जीवन Life oi-Anwesha द्वारा अन्वेषा बरारी अक्टोबर १,, २०११ मा
तपाईं अनुहारको लागि कहिले जानुहुन्छ? स्पष्ट रूपमा हरेक हप्ता होइन जब सम्म तपाईं सेलिब्रिटी हुनुहुन्न। त्यसोभए जब तपाइँ आफैंलाई लाड गर्नको लागि अनुहारको लागि जानुहुन्छ भने तपाईको छालाको लागि के गर्छन छनौट गर्नका लागि सबै भन्दा राम्रो फेशियलहरू छन् भनेर जान्न तपाईं योग्य हुनुहुन्छ। यसैले तपाईको बुद्धिमानी छनौट गर्नको लागि उत्तम अनुहारको मास्कहरूको सूची यसै ठाउँमा राखिएको छ। हरेक प्रकारको अनुहार एक विशेष उद्देश्यको लागि हो। तपाईं अनुहार छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको आवश्यकताहरू मिल्छ र पक्कै तपाईंको बजेट।
यहाँ शीर्ष fac फेशियलहरूको सूची छ जुन तपाईंलाई कुनै पनि औसत ब्यूटी पार्लरमा विकल्पको रूपमा उपलब्ध छन्।
शीर्ष Best सर्वश्रेष्ठ फेशियल:
१. सुनको फेशियल: यो सम्भव छ कि यस प्रकारको अनुहारको लोकप्रियताले महिलाको सुनको प्रेमको साथ केही गर्न सकेको छ। तर अन्यथा सुन छालाका लागि धेरै राम्रो छ र त्यो ज्ञान हाम्रो लागि इजिप्ट जस्ता प्राचीन सभ्यताहरूबाट आयो। सुनको अनुहार मूलतः सुनको धुलो, सुन क्रीम, सुन पन्नी जस्ता विभिन्न अनुपात र कम्पोजिशनमा सुनको प्रयोग गर्दछ र अन्ततः तातोले पग्लन्छ। यसका तीन मुख्य लाभहरू छन् यसको varieties प्रकारका उत्तम अनुहारको मास्क एन्टिग एजिंग, सूर्य क्षतिलाई सुधार गर्दै, र छालामा सेता बनाउने।
मूल्य: १००० र 000००० बीचमा।
२. मोती अनुहार: अर्को लोकप्रिय अनुहार कि एक गहना घटक, मोती पाउडर को उपयोग गर्दछ। मोती अनुहारको अवधारणा पुरातन चिनियाँबाट आएको हो। यो तपाइँलाई निर्दोष र to्ग प्रदान गर्न मानिन्छ जुन उमेरहरूलाई राम्ररी वा प्राथमिकता मा सबै उमेर छैन। पर्ल पाउडर चमकको लागि हो त्यसैले तपाईं यसलाई चम्कने छालाका लागि उत्तम छाला उपचार मध्ये एकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्य: लगभग १००० रुपैयाँ वा अधिक।
Ruit. फल फेशियल: यो तपाईं को लागी राम्रो अनुहार हो यदि तपाईं तेल छाला छ भने। यसले पपाया, अनानास, स्ट्रबेरी आदिका बिभिन्न फलका अर्कहरू प्रयोग गर्दछ जसले तपाईंलाई छालालाई हाइड्रेट गर्न मद्दत गर्दछ र यसलाई कोमल राख्छ। यस अनुहारको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि यसले पूर्ण रूपमा जडिबुटी उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछ, त्यसैले किन यसको लोकप्रियता 'प्रकृतिको नजिक' फडको एक अंश हो जुन यी दिनहरू तातो छ।
मूल्य: Rs०० देखि लगभग १००० सम्म।
Di. हीरा अनुहार: हीरा केटीको सबैभन्दा राम्रा साथी हुन् र त्यस्तै डायमंड फेशियल। फेशियलहरूमा यो नयाँ आविष्कार एक्स्फोलिएसन र कायाकल्पका लागि सबै भन्दा राम्रो अनुहारको मास्क हो। यसले तपाईंको अनुहार र घाँटी क्षेत्रबाट मृत छाला कोषहरू हटाउँदछ जुन तपाईंलाई युवावस्थाको चमक दिन्छ जुन निश्चित रहन्छ। यस विलासी उपचारले तपाईंलाई जवान देखिन्छ बनाउन झुर्रीहरू मिलाउछ।
मूल्य: स्पष्ट रूपमा आफैलाई हीरा जस्तो महँगो र कालातीत, रूपैयाँ २००० देखि सुरु हुन्छ र to सम्म जान्छ।
Ine. वाइन अनुहार: राम्रो छालाका लागि फेशियलका प्रकारहरूको सूचीमा वाइन अनुहार उपन्यास हो। यसले लगभग ट्यान हटाउने, छाला हाइड्रेट गर्ने, कायाकल्प गर्ने आदि सबै असर पार्दछ।
मूल्य: यति धेरै सुविधाहरूको साथ यो जादुई अनुहारको लागि तपाईं 800०० देखि १00०० सम्म भुक्तान गर्नुहुन्छ।
यी उत्तम फेशियलहरू छनौट गर्नका लागि छनौट गर्नुहोस् त्यसैले छनौट गर्नुहोस्।
१ हप्तामा पुरुषहरूको लागि कसरी छाला पाउन सकिन्छ
तेल छाला को लागी होममेड नाईट क्रीम
तपाईलाई पखाला लाग्दा के खानुपर्दछ
फास्ट फूड निबन्धको स्वास्थ्य जोखिम